Tontolo_iainana · Janoary, 2009 · Global Voices teny Malagasy
Tontolo_iainana · Janoary, 2009
Tantara mikasika ny Tontolo_iainana tamin'ny Janoary, 2009
Malezia 20 Janoary 2009
Nahatratra ny faritra maro tany amin'ny firenena Sarawak any Malezia tamin'ny herinandro farany teo ny tondra-drano. Mihoatra ny 8 000 ny olona tany amin'ny Distrikan'i Bau no nafindra ho amina fialofana vonjimaika 24. Ity tondra-drano ity no ratsy indrindra tao anatin'ny telo taona. Nahatratra ny valahina ny haavon'ny rano. Tondra-drano...
Filipina 14 Janoary 2009
R.D. Kongo 14 Janoary 2009
Araky ny tatitra, mangigina kely ny ady any kivu avaratra, faritany any RDC. Misy ihany na dia izany ny adiady madinidinika mety mahafaty. Araka ny voalazan'ny bolongana WildlifeDirect, nisy toejavatra roa nitranga nahafatesan'olona tany amin'ny valanjavaboary any RDC. Manome ny fanadihadiana isan-karazany momba ity vaovao ity i Paula Kahumbu –...
Avia ange ry sambo mpihaza trozona hankaty amin'ny ranon'i Timor atsinanana
Timor Atsinanana 08 Janoary 2009
Sarin'i Fat Old Sod tao @ Xanana Republic Gazzete, nahazo alalana. Notsongaina avy tamin'ny mpampiasa Twitter @BILL_ROMANOS tamin'ny 31 Desambra midera ny nahitan'ny mpikaroka Aostraliana sy Timor Tatsinanana ny lohateny, izany no vokatry ny fikarohana natao vao haingana momba ny fiainana any anaty rano any: Hita tany amin'ny 50 km...